Konke odinga ukukwazi mayelana ne-convection nokudluliswa kokushisa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
La ukuhlangana Kuyinqubo eyenzeka emvelweni lapho ukushisa kudluliswa phakathi ketshezi, okomoya noma oketshezi olunoketshezi, oluqinile noluketshezi, njll. Zonke lezi zinhlanganisela zingenzeka lapho sikhuluma ngale nqubo yokushintshanisa ukushisa lapho zombili izidumbu, kungakhathalekile ukuthi zikusiphi isimo, zizoba namazinga okushisa ahlukene. I-Convection inqubo ebalulekile emeteorology ebandakanya ukudluliswa kokushisa phakathi kwenqwaba yomoya.
Ngabe ufuna ukwazi kabanzi nge-convection? Kulesi sihloko sizochaza konke ngakho.
1 Ukudluliswa kokushisa
4 Izinhlobo zokudlulisa
Ukudluliswa kokushisa kuyinto eyinhloko ekuhambiseni izinto. Akunandaba nesimo somzimba ngamunye, Inqobo nje uma kukhona umehluko obonakalayo wokushisa, ukuhanjiswa kungenzeka. Le yinqubo esiyisebenzisayo ukushisa amanzi ngembiza. Lapho imizimba emibili emazingeni okushisa ahlukene ihlangana, esikwaziyo njengokugeleza kokushisa kwenzeka. Kungumzimba onezinga lokushisa eliphakeme okudlulisa ukushisa kube kuncane.
Lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi, lapho sibeka isandla sethu eduze kwesitofu, sizwe ukushisa. Isitofu asidlulisi lokho kushisa. Kukhona nezinye izinqubo zokudlulisa ukushisa ezifana nemisebe kanye nokuqhuba okuchazwe ngokuhlangana ne-convection, ngakho-ke sizophinde sibuyekeze ngokuhamba kwesikhathi.
Kokubili uketshezi namagesi kubhekwa njengoketshezi. Ukuhamba kwama-molecule alo kubanga ukushisa okwazi ukusungula ukugeleza phakathi kwalezi zidumbu ezimbili. Ukuqhuba okungahambi kahle kokushisa kusho ukuthi inhlama kufanele iphoqwe ukukhipha noma ukunikeza ukushisa. Ukwenza lokhu, kuyapholisa noma kufudumeze okuqinile noma uketshezi.
Isishintshisi sokushisa sisetshenziswa kuma-boilers. Lokhu kuqukethe ipayipi lensimbi lapho amanzi ejikeleza ngaphakathi. Ngaphandle sizoba negesi ezingeni lokushisa eliphakeme kakhulu. Ngenqubo yokudlulisa, igesi izokwazi ukunikela ngokushisa kwayo kushubhu yensimbi futhi amanzi azoyithola ngokuqhutshwa. Ishubhu iyashisa futhi inikeze ukushisa emanzini ageleza aye kolunye uhlangothi. La manzi, athola ukushisa nge-convection, ashisa abe umusi.
Esinye sezihloko ezivame ukuxoxwa uma kukhulunywa ngamandla kungukudluliswa kokushisa okuqondile nokungaqondile. Emishini kagesi yasendlini sisebenzisa ukufudumeza nomoya opholisa ukudlulisa ukushisa noma amakhaza. Le mishini nayo ilahlekelwa amandla ayo. Umhlaba jikelele phakathi kwenani lamandla esiwasebenzisayo nalawo esiwalahlayo ifanelekela ukusebenza kahle kwamandla futhi kuyinto eguquguqukayo ebalulekile okufanele uyinake enanini lokugcina lomkhiqizo.
Ukushayela kuyinqubo eqondakala kalula yiwo wonke umuntu. Ingabe mayelana ukudluliswa kokushisa phakathi kwamaphoyinti amabili asezingeni lokushisa elihlukile. Lokhu kudluliswa kwenzeka ngaphandle kokushintshana ngodaba phakathi kwabo. Isibonelo esilula ngukuthi: sinensimbi yensimbi lapho omunye umkhawulo ungama-degree angama-80 kanti omunye usekamelweni lokushisa. Uma lingekho elinye ithonya langaphandle, ukuhanjiswa kokushisa kokushisa kuzokwenzeka kusukela ekugcineni okushisayo kuye ekugcineni okubandayo. Lokhu kuzokwenza ukuthi ukuphela okubandayo kushise. Ongakusho ukuthi ukushayela kuncike ngokuphelele ohlotsheni lwezinto esikhuluma ngazo. Akufani nokukhuluma ngensimbi kunalena yokhuni. Ukusebenza kuyinto okufanele icatshangelwe kule nqubo ebonakalayo yokushintshana kwamandla.
Enye inqubo ukushintshaniswa kokushisa yimisebe. Sisebenzisa futhi kakhulu ekhaya. Ngukushisa okukhishwa ngumzimba ngenxa yezinga lokushisa kodwa ngaphandle kokuthintana phakathi kwemizimba. Sibonile ukuthi lapho kuqhutshwa kufanele kube nokungqubuzana phakathi kwemizimba noma ukwandiswa kokushisa emzimbeni ofanayo. Okungeke kube nakho ukushintshaniswa kwezindaba. Kulokhu, umzimba ofudumele ungafudumeza amakhaza ngaphandle kokuwuthinta.
Kulolu hlobo lwenqubo sizobona ukushintshana ngokushisa nge iqiniso elilula lokuthi umzimba uyashisa kunomunye. Ukuze le nqubo ibonakale, kuyadingeka ukuthi umzimba ofudumele ube sezingeni lokushisa eliphakeme kakhulu. Isibonelo esilula salokhu singabonakala ehlobo lapho uya olwandle. Uma ushiya imoto imile futhi amahora ayahamba, ubuya uzothatha okuthile futhi uma uthinta insimbi yezicabha uyasha ngenxa yokuthi ishisa kangakanani. ILanga likude kakhulu futhi, nokho, ngemisebe iyakwazi ukudlulisa lokho kushisa iye emotweni.
Endabeni yemisebe sibheka nohlobo lwezinto esibhekene nazo. Ingaphezulu lamapulangwe liyashisa kepha alikwazi ukugcina ukushisa okungako ngenxa yempahla yalo evikela.
Lapho sesichazile ukudluliswa kokushisa okungenzeka okukhona, sizobala izinhlobo ze-convection ezikhona. Ukudluliswa kokushisa nge-convection kungenzeka ngezindlela eziningi futhi kuyilezi:
Kuphoqiwe: Kwenziwa ngefeni, esimweni somoya, noma ipompo, esimweni samanzi, lapho uketshezi ludlula endaweni eshisayo bese ukushisa kuyiswa endaweni ebandayo.
Natural: kwenzeka lapho uketshezi lukhipha ukushisa endaweni eshisayo futhi luguqula ubukhulu balo. Lokhu kudala ukuthi iye endaweni ebanda kakhulu lapho izodela khona ukushisa kwayo.
Ukuqonda kangcono izinhlobo ezahlukahlukene zokuhanjiswa, sizonikeza isibonelo. Uma sivula irediyetha, kufanele silinde ukuthi izinga lokushisa likhuphuke. Uma sibeka isandla kurediyetha ebangeni elifushane, sizobona ukuthi kukhona ukugeleza komoya okungokwemvelo ngokuphelele, ngoba umoya oshisayo uvame ukukhuphuka. Umoya ozungezile uyashisa futhi wehle ngobuningi, okwenza ube nesisindo esincane. Ngakho-ke, igelezela phezulu ibangele ukuthi umoya udlule futhi, iqhubeke ivuseleleka njalo. Kunjengokungathi inqubo eyindilinga.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuhanjiswa nokudluliswa kokushisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukuhlangana
Sawubona. Ngisanda kufunda i-athikili enhle nge-convection. Umfanekiso womlilo wekamu ufakiwe nokuthi kungaba yini ukudluliswa kokushisa ngeMISAKA, UKUGCINA NOKWENZA. Ukufezekiswa kokudluliswa ngemisebe nokwenziwa ngikuqonda kahle, okulukhuni kimi ukukubona ngamehlo umehluko phakathi kweRADIATION ne-CONVECTION. Angiboni mehluko phakathi kokunye nokunye, ngaphandle kokuthi eyodwa iya phezulu ngenkathi imisebe ibheke ohlangothini. Lezi zinhlobo ezimbili ngeke zenziwe nge-convection noma ngemisebe?
Ngabe kufanele ngikuqonde ukuthi ukuhanjiswa ngekhanda njalo kuhlale phezulu hhayi eceleni?
Ngithokozela noma yimiphi imibono engisiza ngikuqonde lokhu.
Ngikubonga kusengaphambili ngesikhathi sakho nokuziphatha okuhle.